May 2013 - Wikipedia
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa galabta 27 May,2013 xarunta PDRC ee magaalada Garowe uga qaybgalay banaamij xogwaran ah oo ku saabsan Puntand iyo Somalia.
Xafiiska warfaafinta ee Madaxtoyada Puntland ayaa soo qaban-qaabiyey barnaamijkan looga hadlay Amaanka ,Geedi socodka Dimoqraadiyada Puntland ,Dhaqaalaha ,Dhalinyarada iyo Arrimaha Federaalka Somalia.
Amaaanka Madaxweynaha ayaa sheegay in dunida oo idil la tacaalayaan arimaha amaanka ,isagoona xusay in Puntland ay ku guuleysatay adkeynta amaankeeda sida dib u habaynta ciidamada ,tababarkooda ,dagaal ay ku qaadeen Al-shabaab buuralayda Galgala iyo kooxaha burcad badeeda ah. Ciidamada amaanka Puntland ayuu ku amaanay dadaalka ay u galeen xoojinta xasiloonida iyo geesinimada ay muujiyeen ,waxana uu raaciyey in Muqdisho ciidanka deeq-bixiyaashu mushaharkooda bixiyaan halka Puntland ay dowladeedu siiso ciidanka xuquuqdiisa.
Geedi socodka Dimoqraadiyada
Geedi socodkan ayuu ku tilmaamay madaxweyne Farole wadadii Puntland horey ugu dhaqaaqi lahayd ,waxana uu ku booriyay dadweynaha inay si isku mid ah uga qayb qaataan doorashooyinka deegaanka ee bartamaha July si Puntland mustaqbal wanaagsan u hesho.
Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay hoosu dhaca ku yimid Shilinka Somaliga oo saamayn ku yeeshay bixin mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidanka,islamarkaasina keentay in Doolar lagu qaado cashuurta laguna bixiyo kharashaadka Dawladda sida ay samaysey DF Somalia.
Heshiiskii DF iyo Puntland galeen March 2013 oo qayb ka ahayd soo daabicida Shilin Somali ayuu sheegay inaan ilaa iyo hadda wax talaabo ah laga qaadin,isagoona raaciyay in Puntland ay ka tashan doonto xalka lacagahaasi.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=May_2013&oldid=130307"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Abriil 2014, marka ee eheed 13:56.